‘जबर्जस्ती अन्त जान्नँ’ - समाचार - कान्तिपुर समाचार
(डडेलधुरा) — डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजान सरकारले डडेलधुरा पठाएको सेनाको हेलिकप्टर रित्तै फर्किएको छ । १७ औं पटक अनशनरत केसीले जबर्जस्ती अन्यत्र नजाने अडान लिएका छन् । स्थानीयले पनि सहमतिविपरीत केसीलाई लैजान नदिने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
सर्वपक्षीय छलफल निष्कर्षविहीन
जिल्ला प्रशासन डडेलधुराले डा. केसीलाई काठमाडौं पठाउन सोमबार गरेको सर्वपक्षीय छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । आन्दोलनरत संघसंस्था र स्थानीयले डा. केसीको इच्छाविपरीत कदम उठाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको प्रजिअ राजुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन,’ उनले भने । डा. केसीको इच्छाविपरीत हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरे थप आन्दोलन चर्काउने उद्योग वाणिज्य संघ डडेलधुराका अध्यक्ष लोकराज भट्टको भनाइ छ ।
वार्ताबाट समाधान खोज : संघ
यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले केसीको जीवन रक्षाका लागि तत्काल वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ । संघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सम्झौता कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन बनेर आयोग गठनले पूर्णता पाउने क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । डा. केसी ८ दिनदेखि डडेलधुरामा १७ औं अनशनमा छन् । पोखरेलले देश कालापानी र लिपुलेकका विषयमा एकजुट भएका बेला अनशन बस्न उपयुक्त नहुने धारणा राखे । केसीले अनशन बस्नुभन्दा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०७:५७
पूर्वी सीमा पनि अस्तव्यस्त
इलाम — जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले दशगजाभित्रै आएर संरचना बनाइरहेको छ । सीमा चेकपोस्टदेखि एसएसबीका क्याम्पसम्म दशगजामै छन् । एसएसबीले सीमा विवाद झिक्दै नेपाली भूमिमा हुने विकास निर्माणका काममा समेत अवरोध गर्ने गरेको छ ।
कालपोखरी, मानेभन्ज्याङ, गुफापातल, छब्बिसेलगायत स्थानमा दसगजा मिचिइसकेको छ । सीमानाका पशुपतिनगरको फाटकस्थित भारतीय चेकपोस्ट दशगजामै छ । सडक, एसएसबीका क्याम्प पनि भारतले एकलौटी रूपमा बनाइरहेको छ । ‘भारतीय पक्षले सीमा वास्ता नगरी पूर्वाधार बनाउने अनि नेपाली पक्ष टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सन्दकपुरका पेमाडन्डु शेर्पाले भने ।
जिल्लाको अधिकांश सीमा क्षेत्रमा भारतको सिंहलीला नेसनल पार्क छ । वन विभागले वन मासेर मासेर संरचना बनाउन नदिने भन्दै भारतले दशगजा मिच्न थालेको हो । यसअघि हिले, पुलखोलालगायतमा पनि सीमा अतिक्रमण भएको थियो । तर, स्थानीयस्तरबाट निकै प्रतिवाद भएपछि भारतीय पक्ष पछि हटेको थियो ।
सीमामा भारतले ३/४ किलोमिटरको अन्तरमा सुरक्षा फौज राखेको छ । नेपालतर्फ भने पशुपतिनगरमा एउटा बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) मात्र छ ।
छब्बिसे, मानेभन्ज्याङ र सन्दकपुरमा सशस्त्रको बीओपी क्याम्प बस्ने भनिए पनि अझै बसिसकेको छैन । मानेभन्ज्याङमा सीमा प्रहरी चौकी, जौवारी र कालपोखरीमा प्रहरी चौकी छन् । स्थानीयले भारतले जसरी नै धेरै स्थानमा सशस्त्र प्रहरी पोस्ट राख्न माग गर्दै आएका छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७६ ०७:५४
शुक्रबार पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा भारी हिमपात हुने
सुत्केरीलाई २५ हजार सहयोग
कोप २५ सम्मेलन : जलवायुजन्य क्षतिमा कसले लगानी गर्ने ?
पनौतीमा पनि रोहिंग्या